Inguqulo 0.8.0 – Attack of the API
November 29, 2011 by okunikezwayo 65 Amazwana
Lapho API fight
Kahle ngaphambi umnqamulajuqu ebangelwa Google Translate API ukuyeka ukusebenza, sasingabantwana Ekugcineni ukuhlanganisa lokhu ukukhululwa entsha. Lona kulandelwe kwesikhathi eside izinkinga banikezwe yi-version endala, ikakhulu ngenxa yokuthi Google wanquma ukuzibuza imikhawulo ukusetshenziswa ngaphambi umnqamulajuqu yabo okuyinto eyabangela izinguqulo odlule ukusekela izicelo ukunqwabelana kuya phezulu ezintsha. Ushintsho Google wabuye kwaba yiyona umkhawulo API in the Bing translation API, kusukela abasebenzisi zase ukushintsha izinjini, okuyinto zigcwale ngokweqile the Transposh hard code API esemqoka Bing.
Kuleli qophelo saba version esiqinile, okusho kwakubonakala into enhle ukukhipha, kodwa akukho, Kwakudingeka sibe ngezinye izici in, ngakho sagcina wanquma ukubhekana indaba amawijethi multiple support (kanye nokukhetha isihloko futhi, yippee!). Sibonakala phambili iqonde impela? kodwa akukho, lokhu kwabangela loba futhi enkulu ye widget kwengqalasizinda yethu kanye. Empeleni ngcono khona impela kakhulu ne ekushintsheni indlela CSS kwanezelwa, kanye nendlela le amawijethi ngesamba the servers yokushintsha kolimi (manje gwema iposi call engenamsebenzi kwiseva). Ngenkathi ubhala ukuthi thina nenhlanhla ngokwanele ukuba akhubeke phezu PHP5.3 kuya PHP5.2 ukungavumelani daba inhlanganisela yezimpawu yezinye izinkinga elalineziboshwa sikhululwe emuva elinye sonto. Sifuna ukubonga le abasebenzisi eziningi eziye sibeke nge beta lethu ukukhishwa up futhi wasiza sithole izinkinga babecashe ngaphansi zamatshe code and yinkimbinkimbi.
Siphinde wathatha leli thuba lokushintsha ngokwemibandela zethu kancane, uma izikhangiso Google kusuka AdSense emakhasini akho elihunyushwe, thina kuzothatha 1/1000 laleso isikhala ukusetshenziswa ne nezici zethu siqu adsense, ngakho uma Transposh isiza wena kugqugquzelwe indlela imali ye $ 10K uzobe ukuthenga nathi ikhofi! Ngakho ngiyabonga! Ukuze acacise izinto kancane, singazi ukudala isikhala ad olwengeziwe ekhasini lakho, futhi ngeke ufake noma yimaphi izikhangiso noma ushintshe layout yakho, uma kungekho izikhangiso, senza lutho. Uma ucabanga ukuthi lokhu akukuningi, kungase ususe plugin yethu, ikhwela ingoma elithambile, futhi uhambe. Uma ufuna ilayisense commercial, singazi ukuthengisa kubo okwamanje, kodwa uzoba kungenzeka alahlekelwe ngaphezulu.
Nezinye izinguquko kule nguqulo zifaka:
Wanezela Catalan and Hindi nokusekelwa Bing – liyazikhulumela.
Iwijethi okwehliswayo CSS ngcono – empeleni ubukeka ngcono manje.
Ukwesekwa Memcached – uma Apc nezinye caches opcode zase obuningi kuwe, Manje ungasebenzisa memcached bese Ziningi fun.
Better 404 Ikhasi yokuphatha (abenzi ukuxhumana ezintsha ukuze amakhasi ezingekho ekhona) – okusho the abakhase Google uyobe bekuhlupha indawo yakho kancane.
Fix Ukulondoloza isikhashana on rackspace cloudsites – abase x-isilondolozi ezifakiwe for isilondolozi opcode, kodwa kungabikho memory yomsebenzisi, okudale yokwanda logfiles – manje fixed.
Fixes eminingi more ezincane – Singase ukubala lezo, kodwa asinawo iminwe anele.
Ukuhumusha Turkish by Semih Yesilyurt.
Sithemba uyophila nguqulo, futhi njengoba ngaso sonke isikhathi, elinde izimvo zakho, Imibono, Iziphakamiso amalangabi.
P.S – Evivinywa WordPress 3.3 beta4, usebenza elikhulu.
Lalihlezi Ngaphansi: Izimemezelo ukukhululwa, Izibuyekezo Software Umake With: Ajax, bing (MSN) umhumushi, bugfix, google ukuhumusha, ukukhululwa, iwijethi, xcache